DAAWO VIDEO: ‘‘Somaliland u dul-qaadan mayso cid walba oo soo faragelisa Qaranimadeeda”! waxa yiri… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: ‘‘Somaliland u dul-qaadan mayso cid walba oo soo faragelisa Qaranimadeeda”!...
DAAWO VIDEO: ‘‘Somaliland u dul-qaadan mayso cid walba oo soo faragelisa Qaranimadeeda”! waxa yiri…
Hargeysa (Halqaran.com) – Guddoomiyaha golaha wakiillada ee Somaliland, Baashi Maxamed Faarax, ayaa si kulul uga hadlay khilaafka ka taagan Kommission-ka doorashooyinka cusub, isagoo sheegay in khilaafkasta soo kala dhexgala xukuumadda Somaliland iyo mucaaradka ay iyagu dhexdooda xalisan-jireen.
Guddoomiye Baashi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in hay’ado ajaaniib ah ay soo kala dhexgalaan markii ay is khilaafaan xukuumadda Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland ka jira.
Haddaba Hoos ka daawo Muuqaalka guddoomiye Baashi oo arrimo xasaasi ah ka hadlay:
DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee Japan
DAAWO SAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay maareeyaha garoonka Kismaayo, Muxuu kala hadlay?
Hal Xaaraan ah Nirig Xalaal ah ma Dhasho
AKHRI: DF Somaliya oo war culus ka soo saartay dilkii Almaas Elman, kuna hanjabtay inay ….
DAAWO VIDEO: Madasha Xisbiyada Qaran oo war deg-deg ah ka soo saaray shirkii Farmaajo & Madaxdii hore + Wixii lagu heshiiyay
Baashi Maxamed Faarax
Guddoomiyaha golaha wakiillada ee Somaliland